यस लेखमा हामी बारे विस्तृत वर्णन गर्ने यस्तो Skuratov Sergey Aleksandrovich (architect)। उहाँले 1955 मा मास्को मा जन्म भएको थियो। उहाँले आर्किटेक्ट्स अध्यक्ष छ। यो मास्को आर्किटेक्ट्स को संघ छ। उहाँले वास्तुकला को एकेडेमी को एक प्रोफेसर छ। रूसी र अन्तर्राष्ट्रिय शो र प्रतियोगिताहरु को विजेता। मास्को को मानार्थ बिल्डर।
Sergey Skuratov - एक सैन्य पायलट परिवार आउँछ जो एक architect। 1963 देखि उहाँले उच्च स्कूलमा अध्ययन। उहाँले थप शिक्षा पाए। Sergey Skuratov Krasnopresnensky कला स्कूल जिल्ला उपस्थित। 1973 मा उहाँले वास्तुकला को मास्को संस्थान को एक विद्यार्थी भयो। उहाँले आवास को संकाय मा अध्ययन। 1979 मा उहाँले वास्तुकला को मास्को संस्थान देखि स्नातक।
Skuratov Sergey Aleksandrovich 1979 देखि 1982 को CNIIEP तर्फबाट बी एस Mezentseva मा एक architect थियो। उहाँले मार्क Bubnov संग स्टूडियो मा काम गरे। 1982 देखि उहाँले एक कलाकार सजावटी कला को काम मा, साथै KMDI रूपमा काम गरे। 1986 देखि 1988 को लागि, सर्गेई Skuratov बी एस Mezentseva नाम TSNIIEP मा वास् समूह नेतृत्व। उहाँले ब्रिगेड Larina मा काम गरे। 1988 मा, त्यो आर्किटेक्ट्स को संघ साथ दिए। 1988 देखि 1990 को लागि, मान्छे अर्को महत्त्वपूर्ण स्थिति लिए। उहाँले "परियोजनाहरू" भनिन्छ वास्तुकला र कलात्मक ब्यूरो मा मुख्य architect थियो।
1990 देखि 1995 को त्यो जेवी एमडीसी "ARKSIM" संग काम गरे। यहाँ उहाँले परियोजना को मुख्य architect थियो। 1995 देखि 2002 उहाँले कम्पनी "Sergey Kiselev र भागीदार" संग collaborated।
यहाँ उहाँले परियोजना को मुख्य architect रूपमा सेवा गरे। 1999 मा उहाँले मास्को को मानार्थ निर्माता को शीर्षक पाए। 2002 देखि उहाँले आर्किटेक्ट्स अध्यक्ष बने। 2003 देखि उहाँले वास्तुकला को एकेडेमी मा एक प्रोफेसर छ
Sergey Skuratov Butikovskiy लेन मा एक आवासीय जटिल विकास गर्न काम गरे। यसको डिजाइन 2000 देखि 2002 को अवधि मा भयो, निर्माण 2001-2003 मा गरियो। वस्तु ठेगाना - मास्को, Butikovsky लेन5उहाँले पुरस्कार को एक नम्बर प्राप्त यो काम को लागि, शो जस्ता सबै भन्दा राम्रो परियोजना लागि मास्को वास्तुकला को एक विजेता भयो। Sergey Skuratov एक आवासीय जटिल कपर हाउस विकास गर्न काम गरे। डिजाइन 2002 देखि 2003 को अवधिमा गरियो, निर्माण 2003-2004 मा गरियो।
सुविधा मास्को मा स्थित छ, Butikovskiy लेन 3. यो काम माध्यम, त्यो मास्को प्रतियोगिता को एक विजेता वास्तुकला को सबै भन्दा राम्रो कामको लागि भयो। एउटै मानिस Mosfilm मा हाउस सिर्जना गरियो। परियोजना निर्माण 2004 देखि 2011 को सुविधा Pyreva 2. यो काम सम्मानित गरिएको छ "यस वर्षको हाउस" सडक मा मास्को मा स्थित छ गर्न स्थान लियो।
वास्तु ब्यूरो Sergey Skuratov र व्यक्तिगत यसको निर्देशक धेरै प्रमुख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उहाँले तिहार "आर्क मास्को" को रूपरेखा मा सबै भन्दा राम्रो भवन लागि प्रतियोगिता जित्यो। आर्किटेक्ट यसलाई "Icarus" र "स्वर्ण डिप्लोमा" को पुरस्कार सम्मानित गरियो अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव शीर्षक "वास्तुकला" मा भाग। उहाँले नाम "स्वर्ण धारा" अन्तर्गत सम्मानित गरिएको थियो।
आर्किटेक्ट धेरै पटक परियोजना "वास्तुकला" मा भाग। यो 1997, 2003 र 2004 मा भएको थियो। उहाँले 1997 देखि 2003 को "स्वर्ण धारा" परियोजना मा भाग। 1997 देखि 2007 आफ्नो काम "आर्क मास्को" मा प्रस्तुत गरिएको थियो। 1999 मा, "छोड्नुहोस्" मास्को मा कम्पनी को एकल प्रदर्शनी मा भाग। 2001 मा, त्यो लण्डन घटना उपस्थित। त्यहाँ उहाँले परियोजना "दस सर्वश्रेष्ठ मास्को आर्किटेक्ट्स" मा भाग। चाँडै उहाँले जर्मनी निमन्त्रणा गरिएको थियो। "पाँच सर्वश्रेष्ठ मास्को आर्किटेक्ट्स" मा श्टुटगार्ट मा परियोजना मा भाग।
म बर्लिन गए। परियोजना "मास्को को नयाँ वास्तुकला" मा भाग त्यहाँ लगे। 2004 मा, फेरि तपाईं मास्को मा आफ्नो काम प्रस्तुत। यो परियोजना को "वस्तु" को रूपरेखा थियो। 2006 मा, आफ्नो प्रदर्शनी वास्तुकला को एकेडेमी को ग्यालरीमा स्विट्जरल्याण्ड मा आयोजित थियो - "। नयाँ मास्को-4" 2007 मा, उनले मस्को क्षेत्र, Pirogovo रिसोर्टमा भ्रमण गर्नुभएको थियो। को हल मा वास्तुकला को संग्रहालय Shchusev दुई प्रदर्शनियों को architect काम गर्न समर्पित पारित नाम। 2001 मा, XX सताब्दी को सबै भन्दा राम्रो भवन को एक संग्रह Zubovsky खण्डमा स्थित एक आवासीय घर थियो। 2003-2004 मा। त्यसैगरि मा कपर हाउस चिन्ह लगाइएको थियो।
शहरी परिसर, सार्वजनिक र सांस्कृतिक भवन, उच्च-वृद्धि र निजी घरमा, उच्च-वृद्धि भवनहरु - आर्किटेक्ट Sergey Skuratov आर्किटेक्ट्स कार्यालय कठिनाई को बदलिने डिग्री को परियोजनाहरू विकास। वर्षौंदेखि कम्पनी अधिक तीस परियोजनाहरू प्रतिलिपि अधिकार बेचे थियो। मास्को र रूसी संघ को अन्य शहर मा erected अद्वितीय भवनहरु, पेशेवर सार्वजनिक बीचमा पहिचान गरिएको छ। फलस्वरूप, कम्पनी आर्किटेक्ट्स अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति जित्यो छ।
हामी पनि Khamovniki मा स्थित छ जो "बगैचा चौथाई" भनिन्छ जटिल, उल्लेख गर्नुपर्छ। यो सबैभन्दा घमन्डी परियोजना स्टूडियो छ। यो बासिन्दा लागि सार्वजनिक र खुला वासस्थानमा आसन्न छन् कि मास्को सिद्धान्त सबै सुरक्षित र बन्द आवासीय क्षेत्रमा फर्काउँछ। एआरटी सदन भनिन्छ आवासीय जटिल - एक असामान्य कला संग एक घर छ। सम्पत्ति को Yauza को embankment मा स्थित छ। यो क्लिंकर रूपमा, यो कुरा को अपार सम्भावनाहरू देखाउनुहुन्छ।
साथै, ऐतिहासिक शहरी वातावरणमा यस्तो समकालीन इशारा एकदम उपयुक्त देखिन्छ। मास्को मा उपस्थिति व्यापार केन्द्र मा कम्तिमा नीरस मानिन्छ जटिल "Danilovsky फोर्ट" गर्न सकिन्छ। यो एक सिपालु प्लास्टिक FACADES रोजगारी प्रदान गर्दछ। कम्पनी सेवाहरु को एक किसिम प्रदान गर्दछ। यो पार्क, Multifunctional परिसर, आवासीय र सार्वजनिक भवन, संग्रहालय, आर्ट ग्यालरी र कन्सर्ट हल, थिएटर, शैक्षिक संस्थाहरु, विश्वविद्यालय, कलेजहरूलाई, विद्यालय, Kindergartens, व्यापार वास्तुकला, कार्यालय, व्यापार र सपिङ्ग सेन्टर, होटल, निजी आवासीय डिजाइन मा लगी भएको छ भवन।
कार्यालय पनि परियोजना विश्लेषण क्षेत्र बाहिर वहन। प्राविधिक र आर्थिक प्रदर्शन, कार्यक्षमता, परियोजना को लागत प्रभावकारिता द्वारा निर्धारित।
आफ्नै हातले विला को लागि एक छत र Canopies निर्माण
"कालिगढ": कम्पनी बारे कर्मचारी देखि प्रतिक्रिया
मानवतावाद - एक ...
समीक्षा मालिक लामो बयलर जल pyrolysis। ठोस Pyrolysis लामो बलिरहेको बयलर
दर्जा उच्च दबाव वाशर। लोकप्रिय मोडेल। विवरण, मूल्य
बाहिरी समाप्त यस प्रकारको घरमा SHEATHING र लाभ
वाहन डिजाइनको परिमार्जन: कानूनका आवश्यकताहरु
प्रेम selfless छ - यो सत्य वा मिथक छ
Meatless casserole: व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने सुझाव
कोट आफ्नो दराज लागि बाख्रा को